Guriga - Iskuulada Deegaanka Robbinsdale
Dareen jacaylkaaga muusikada.
Jidkaaga heer sare ee farshaxanka.
Diirada Gaar ahaaneed. Suurtogal ah
Waxaa loo habeeyay barista dhaqan ahaan mas'uul ka ah iyo barashada shaqsiyanka ah ee ardayda oo dhan.
Soo ogow dariiqa aad u mari karto kuleejka, xirfadaha iyo u diyaar ahaanta shaqada.
Wadashaqeynta aan la leenahay Kuleejka Farsamada ee Degmada Hennepin waxay ardayda u soo bandhigtaa dariiqooyin shaqo oo ka bilaabanaya dugsiga dhexe.
Himilada Degmada Midaysan
Himiladeenna waa inaan dhiiri galino oo waxbarno dhammaan bartayaasha si ay u horumariyaan awoodooda gaarka ah isla markaana si wanaagsan ugu tabarucaan beeshooda.
Heer sare waa Heerka
Farriin ka socota Kormeeraha Ku-meel-gaarka ah Dr. Burrage
Aniga oo ah kormeeraha guud, aniga ayaa ah mas'uuliyadeyda inaan bixiyo hogaamiye istiraatiiji ah oo ku saleysan Nidaamka Mideysan ee Himilada Degmada iyo Nidaamka Sinnaanta.
Bilowga Smart Start 2020-2021: Si Ammaan Bilaabasho Ku Bilaabida Dugsiga
Macluumaadka iyo cusboonaysiinta
Badbaadada ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska ayaa sii wadaysa ahmiyadeena koowaad.
Waxaa naga go'an hubinta caddaalad, sinnaan iyo ka mid noqoshada sidii mabaadiida aasaasiga ah ee degmadeena.
In Loogu Baahan Yahay Diyaar Awood Shaqo
Iskaashiga farsamada ee Hennepin
Iskaashiga iskaashiga ayaa ujeedadiisu tahay in la xoojiyo dariiqa loo maro xirfadaha xirfad leh iyo waxbarashada farsamada.
Kobcinta Bartayaashayada da 'yarta ah
Diyaargarowga Xannaanadu wuxuu bilaabmaa dhalashada
Barnaamijyada Carruurnimada Hore waxay bixiyaan fursado laga bilaabo dhalashada ilaa xanaanada, iyagoo taageera koritaanka caafimaadka iyo horumarka.
Kala Soco Dhamaan Wararka
Eeg Dhamaan Dhacdooyinka
Maajo Jimce 7
Iskuul Malaha (Shaqaalaha Magdhaw)
Maajo Talaado 11
Golaha La-talinta Dowladda (GAC)
Shirka Guddiga La-talinta Waalidiinta Hindida Mareykanka (AIPAC)
Shirka Degmada CIA
5 : 30 PM - 6 : 45 PM
Shirka Golaha latalinta dhaqaalaha
6 : 30 PM - 8 : 00 PM
Maajo Arbaco 12
Laga yaabaa Sabtida 15
Iskuulada Robbinsdale Area ee Loogu Talo Galay Nolosha
6 : 00 PM - 11 : 59 PM
Maajo Axad 16
12 : 00 subaxnimo - 6 : 00 Subaxnimo
Maajo Isniinta 17
Golaha La Talinta Bulshada Ed
5 : 00 PM - 6 : 30 PM
Maajo Talaado 18
May Khamiista 20
Sinnaanta Taxanaha Waxbarshada
6 : 00 PM - 7 : 30 PM
Maajo Isniinta 24
Waqtiga Dhageysiga Guddiga Dugsiga
6 : 00 PM - 6 : 50 PM
Shirka joogtada ah ee guddiga iskuulka
Gudiga Iskuulka oo Xiran Fadhiga, iyadoo la raacayo MN Statute 13D.05, Subd 3 (a)
8 : 30 PM - 9 : 30 PM
Maajo Arbaco 26
Xisbiga Hawlgabka Furashada
Maajo Jimce 28
Qalinjabinta RTC 2021
Maajo Isniinta 31
Dugsi La'aan (Maalinta Xusuusta)
Juun Isniinta 7
Shirka Gudiga Ganacsiga iyo Kulanada Shaqada
Juun Talaado 8
Hada Farxad Leh